हेर्नुहोस् हाँसोका फाइदाहरु — Motivatenews.Com
काठमाडौं– नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलले आफू र छोरा नवीन पौडेलको नाममा रहेको बालुवाटारको जग्गाबारे भ्रम सिर्जना गर्न खोजिएको दाबी गरेका छन् । कित्ता नं. ३०९ को क्षेत्रफल ०–०–१–१ र कित्ता...
बैशाख ६, काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले इन्टरनेटमा खेलिने खेल पब्जी प्रतिबन्ध लगाउने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको...
बेझाड । बिप्लव नेतृत्वको नेकपा निकटको अखिल नेपाल किसान सङ्घ पाल्पाका अध्यक्ष टोपराज बस्याललाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । तानसेन...
काठमाडौँ । एनआरएन अमेरिका को २०१९/२०२१ निवार्चन कार्यतालिका सार्वजनिक भय संगै उमेदवारहरु को मनोनयन प्रक्रिया सुरु भएको छ । लामो...
काठमाडौं – मोटिभेट न्यूज डटकमले सफलता लागि विभिन्न उत्प्रेरणात्मक लेखहरु यहाँहरुको माझमा पस्किदै आइरहेको छ । यसै क्रममा आज हामीले स्विेट मार्डनको सफलताका २५ नियम पुस्तकबाट यो समाग्री साभार गरेका छौँ । विनिता पौडेलले नेपाली भाषामा अनुवाद गरेको यो पुस्तक एचपी प्रकाशनले बजारमा ल्याएको छ । खरायोको औषत आयु ७ बर्षको...
तनावबाट कसरी मुक्त हुने ? उपाए सहित
काठमाडौँ । नाई नभन्नु ल २ बाट नेपाली रजतपटमा प्रवेश गरेकी नायिका बर्षा सिवाकोटीले चर्चित एप टिकटक बन्द गर्न माग गरेकी छन् । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एक स्टाटस मार्फत उक्त एपले कलाकारहरुको महत्वलाई अवमूल्यन गरेको भन्दैँ बन्द हुनुपर्ने विचार राखेकी हुन् । उनै नायिका सिवाकोटीले, कलाकारको भ्यालु घटाउने टिकटक जस्ता...
पशुपति शर्माले लुट सके लुट गीतका कारण नाम भएर पनि पदक पाएनन् ?
काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले २०७५ साल असोज ३ गते संविधान दिवस (राष्ट्रिय दिवस) का दिन घोषित विभूषणहरुमध्ये मानपदवी प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरुको नामावली सार्वजनिक गर्‍यो। विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिलाई प्रदान गरिएको नेपाल...
सलमान खानको हुँकारः मेरा फ्लप फिल्म नै मेरो सफलता हो, मलाई माया गर्ने सबैलाई धन्यवाद
काठमाडौँ । भारतीय चलचचित्रका चर्चित अभिनेता सलमान खानले एक टेलिभिजन अन्तरवार्तामा कडा जवाफ दिएका छन् । अभिनेता खानले आफ्ना फ्लप चलचित्र नै सफलता भएको भनी प्रश्नकर्तालाई कडा जवाफ दिएका छन्...
सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने कल्पना समेत गरेको छैन्ः मन्त्री बाँस्कोटा